तपाईंले आफ्नो शरीरलाई विक्री गर्नुपर्‍यो भने मूल्य कति राख्नुहुन्छ ? पढ्नै पर्ने लेख - ज्ञानविज्ञान
आउनुहोस्, एकछिन हाम्रो शरीरको मोलमोलाई गरौं । तपाईंको शरीरको मूल्य कति ? १० लाख, ५० लाख, एक करोड, पाँच करोड, अर्ब । कति ?
मानौं तपाईंको कलेजो बिक्री गर्नुपर्ने भयो, फोक्सो बिक्री गर्नुपर्ने भयो, कतिमा बेच्नुहुन्छ ? यी अंगको कुरा छाडौं । के तपाईं आफ्नो हातको एउटा औंला बेच्न तयार हुनुहुन्छ ?
निश्चय पनि तपाईंको बोली बन्द हुन्छ । अर्थात नाजवाफ हुनुहुनेछ । किन ?
यसको अर्थ हो, शरीर अनमोल छ ।
तपाईंले हातमा लगाएको घडीको मूल्य छ, पन्ध्र सय, पाँच हजार वा बाह्र हजार । तपाईंले चढ्ने मोटरसाइकलको निश्चित बजार मूल्य छ, डेढ लाख, दुई लाख वा चार लाख । तपाईंले आफ्नो जग्गाको मूल्य पनि तोक्नुभएकै छ, प्रति आना सात लाख, १० लाख वा १५ लाख । तपाईंको घरको बजार मूल्य पनि तय भइसकेकै छ, पचास लाख, एक करोड वा दुई करोड ।
तपाईंसँग भएका ति सबै भौतिक सम्पतिको निश्चित बजार मूल्य छ । ति सबैकुरा तपाईं किन्न र बेच्न सक्नुहुन्छ ।
तर, तपाईंको शरीर अनमोल छ । लाख, करोड, अर्ब, खर्ब जति मूल्य चुकाएपनि तपाईं आफ्नो शरीर बेच्न तयार हुनुहुन्न । किनभने शरीर नै नभएपछि तपाईंलाई जतिसुकै धनदौलत पनि आवश्यक हुँदैन । अबौर्ं रुपैयाँ होस् वा आलिसान महल, जतिसुकै घर-घडेरी होस् वा विलासी गाडी । ति सबै व्यर्थ हुनेछ, जब तपाईंको शरीर नै हुनेछैन ।
अब एकपटक सोच्नुहोस् त, अहिले तपाईंले के कुरालाई बढी महत्व दिइरहनुभएको छ ?
धनदौलत, जग्गा-जमिन, मोटर-कार, घर-घडेरीलाई । निश्चय पनि हामीलाई धन-सम्पति चाहिन्छ । हामी भव्य घरमा बस्न चाहन्छौं, विलासी गाडी चढ्न चाहन्छौं, यथेष्ठ जग्गा जमिन जोड्न चाहन्छौं । किनभने हामी दुःख, अभाव, कष्टसँग भयभित छौं । यस्तो अवस्था झेल्न नपरोस् भनेर हामी सम्पति आर्जन गर्न चाहन्छौं । ऐश-आरम एवं सुविधाको खोजीमा पनि हामी धन-दौलतको पछि लाग्छौं ।
धन सम्पति आर्जन गर्नु नराम्रो होइन । मूर्खता होइन । मूर्खता चाहि के हो भने, धन दौलतकै खातिर आफ्नो शरीर मूल्य गुमाउनु । अर्थात धन-दौलतको लागि हामी यसरी चक्कर लगाइरहेका हुन्छौं कि शरीरको कतिपनि ख्याल राखिरहेका हुँदैनौं ।
जस्तो हाम्रो दिनचर्या र सोंच-चिन्तन कस्तो छ ? हेरौं ।
हामी बिहान ६ वा ७ बजे ओछ्यान छाड्छौं । ओछ्यान छाड्नुअघि हाम्रो हातमा मोवाइल हुन्छ । मोवाइलमा हामी फेसबुक चलाइरहेका हुन्छौं वा साथीसँग कुनै कारोवारको वा नाफाघाटाको कुरा गरिरहेका हुन्छौं ।
उठेपछि हामीलाई चियको तलतल लाग्छ । चियासँगै चुरोट पनि । चिया र चुरोट पिइरहँदा पनि हामी साथीभाईसँग कुनै जग्गाको वा कुनै कामधन्दाको कुरा गरिरहेका हुन्छौं । लेनदेनको कुरा गरिरहेका हुन्छौं ।
भान्सामा भात पाकिरहेको छ । तर, घरको भात पर्खेर बस्ने फुर्सद छैन हामीलाई । हामी यति हतारोमा हुन्छौं कि, गाँस टिप्ने फुर्सद मिल्दैन । वा खाना यति हतारमा खान्छौं कि न त्यसको स्वाद थाहा पाउँछौं, न राम्ररी खान्छौं ।
अब दिनभर तपाईं केको चक्कर लगाउनुहुन्छ ? पैसाको, कमाईको ।
कहाँ जग्गा खरिद गर्ने ? कहाँबाट पैसा कमाउने ? के-कसो गरेर पैसा बचाउने ?
साँझ साथीभाईसँग मदिरासहितको जमघट पनि हुनसक्छ । यो जमघटको उदेश्य पनि कतै न कतै तपाईंको कारोबारसँग सम्बन्धित छ ।
राती घर र्फकनुहुन्छ । दिनभरको हिसाब-किताब सोच्दा-सोच्दै तपाईंको निद्रा विथोलिन्छ । कतै मिल्न लागेको काम बिगि्रएको छ, कतै नयाँ काम फेला परेको छ । कति ठाउँमा तपाईंले धोका पाउनुभएको छ । यिनै कुराहरुले तपाईंको मन विथोलिन्छ ।
हात पर्नै लागेको जग्गा फुत्किएको कुराले तपाईं वेचैन हुनुभएको छ । कतै राम्रो आयआर्जन हुने स्रोत फेला पार्नुभएको छ । यो खुसीले पनि तपाईंको मनमा उथलपुथल ल्याएको छ ।
हेर्नुहोस् त, दिनभरमा तपाईं पैसाकै चक्करमा लाग्नुभयो । जे-जति काम गर्नुभयो, जे-जति साथी भेट्नुभयो, जे-जति ठाउँमा पुग्नुभयो, ति सबैमा तपाईं पैसा वा धनसम्पतिसँग जोडिएर पुग्नुभयो ।
के यसबीचमा तपाईंले आफ्नो शरीरको ख्याल राख्नुभयो ? सही समयमा खाने र पिउने गर्नुभयो ? विश्राम गर्नुभयो ? खानेकुराको शुद्धता र पोषणमा चासो राख्नुभयो ? तनाव वा वेचैनीबाट मुक्त रहने प्रयास गर्नुभयो ? खुसी रहने अभ्यास गर्नुभयो ?
संभवत तपाईंले आफैलाई भुल्नुभयो । आफैलाई भुलेर सम्पति अनि सुखको खोजीमा दौडनुभयो । अब भन्नुहोस् त, तपाईंले आफ्नो अनमोल शरीरलाई कति बेवास्ता गरिरहनुभएको छ ?
शरीर अनमोल छ । यो अद्भुत पनि छ । यही शरीर भएर नै हाम्रो अस्तित्व छ । तर, हामी आज आफ्नो शरीरलाई बेवास्ता गर्दै धन-दौलतको पछाडि दौडिरहेका छौं । धन-दौलत अनावश्यक छ भन्ने होइन । तर, प्राथमिकता शरीरलाई दिनुपर्छ । शरीरलाई निरोगी, तन्दुरुस्त राखौं ।
‘अरुको आङको जुम्रा देख्ने, आफ्नो आङको भैंसी पनि नदेख्ने ?’ नेपाली समाजमा प्रचलित भनाई हो यो । ख्याल गर्नुहोस् त, जब हामी एकअर्कासँग भेट्छौ । साथीभाई बस्छौ । तब तेस्रो पक्षको बारेमा टिप्पणी गर्न थाल्छौ । ‘फलानो यस्तो, फलानो उस्तो’ भन्दै । हामी उक्त व्यक्तिको नराम्रो कुरा मात्र खेलाइरहेका हुन्छौ, खोतलीरहेका हुन्छौ । अनावश्यक र मनगढन्ते टिकाटिप्पणी गरिरहेका हुन्छौ ।
जबकी हामी यसरी जमघट भइरहँदा कहिल्यै तेस्रो व्यक्तिको गुणगान गाउँछौ ? तोस्रो सकारात्मक र राम्रा कुराहरुबारे चर्चा गर्छौ ?
यो दुर्लभ वा अपवाद हुनसक्छ । किनभने अक्सर हामी अरुको निन्दा गरेर आफु रमाइरहेका हुन्छौ । अरुको बारेमा नराम्रो कुरा गरेर, अरुको बारेमा नराम्रो चर्चा गरेर हामी आनन्द लिइरहेका हुन्छौ । हाम्रो प्रवृत्ति के हुन्छ भने, अरुको गल्ती कमजोरी सजिलै पहिल्याउने । अरुले के गल्ती गर्छ, अरुको कमजोरी के छ ? हामी फटाफट भन्न सक्छौ । खुट्याउन सक्छौ ।
आफ्नो गल्ती-कमजोरीमा किन हाम्रो मुख टालिन्छ ?
तर कसैलाई सोध्नुहोस्, ‘तिम्रो गल्ती कमजोरी के छन् ?’ संभवत त उनको मुख टालिनेछ । उनको वाक्य फुट्ने छैन । चुपचाप बस्नेछ । किनभने अरुको गल्ती/कमजोरी खोतल्नेहरुले आफैतिर भने कहिल्यै फर्केर हेरेका हुँदैनन् । आफ्नो गल्ती कहिल्यै देख्दैनन् । कमजोरी देख्दैनन् । त्रुटी देख्दैनन् । अरुको चियोचर्चा गर्दागर्दै आत्ममूल्यांकन गर्न भुल्छन् ।
हामी अरुको नराम्रो कुरा कति सजिलै पहिल्याउँछौ ? यदि कुनै व्यक्तिको नाम लिएर हामीलाई ‘फलानोको बानी कस्तो छ ? फलानो कस्तो मान्छे हो ?’ भनेर सोधियो भने हामी फटाफट जवाफ दिन थाल्छौ । कनीकुथी उनको गल्ती र कमजोरी औल्याउन थाल्छौ । प्रश्नकर्ताले उनको नकारात्मक कुरा मात्र सोधेका हुँदैनन् । तर, हामी उनको सकारात्मक कुरा भन्दै भन्दैनौ ।
अरुको क्षमता, सफलतामा हामी किन दृष्टिविहिन ?
हरेक व्यक्ति सर्वगुणी हुँदैनन् । गल्ती सबैले गर्छन् । कमजोरी सबैमा हुन्छ । अवगुण सबैसँग हुन्छ । तर, साथसाथै हरेक व्यत्तिका केही न केही राम्रा पक्ष हुन्छ । गुण हुन्छ । क्षमता हुन्छ । हामी ति क्षमता, गुण कहिल्यै अरुलाई सुनाउँदैनौ ।
किनभने हामीमा कुष्ठा छ । हामीमा इष्र्या छ । हामीमा दम्भ छ । यहि कुण्ठा, इष्र्या, दम्भले हामीलाई यसरी थिचेको छ कि, माथि उठेर खुला र निष्पक्ष दृष्टिले समाज एवं दुनियाँ नियाल्नै दिदैन । हाम्रो आँखामा पनि भ्रमको पर्दा लगाइदिएको छ । त्यही कारण हामी अरुको सकारात्मक कुरा, गुण, क्षमता कहिल्यै देख्दैनौ । देखेपनि खुला रुपमा चर्चा गर्दैनौ ।
वास्तवमा यो एक किसिमको मनोविकार हो । हामी यस्ता दुषित मनोविकारले यति ग्रस्त छौ कि, हाम्रो इन्दि्रयले पनि ठिकसँग काम गर्न सक्दैन । अरुले राम्रो भनेको, अरुले राम्रो गरेको, न हामीसँग सुन्ने कान छ, न हेर्ने आँखा छ । न त बुझ्ने मन नै छ । हामी अनुभूत पनि गर्दैनौ ।
हामी किन यतिधेरै नकारात्मक भयौ ?
हामी मानविय मूल्य र मान्यताबाट पन्छिदै गएका छौ । भौतिक सुख-सयलको भोग एवं तृष्णाले हामीलाई व्याकुल बनाएको छ । त्यही कारण हामी मानविय जीवन बाँच्न भुल्दैछौ । हामी आफैलाई अवगुण र विकारको भण्डार बनाउँदैछौ, त्यही कारण अरुलाई हामी खराब, नराम्रो, दुर्गुणी, कमजोर देखिरहेका छौ । यो हाम्रो आफ्नै दृष्टिदोष हो ।
अरुलाई होच्याएर आफुलाई सान्तवना
हामी अरुको कुरा किन काट्छौ ? किन अरुको अवगुणको मात्र चर्चा गर्छौ ?
हामीलाई किन अरुको प्रगति, उन्नती, सफलताले सुखी बनाउँदैन ?
किनभने हामी आफुभित्र दबिएको मनोवेगलाई घटाउन वा थमथमाउन अरुको नराम्रो कुरा गर्छौ । कुनै व्यक्तिको नराम्रो कुरा वा दुर्गुण बताएर हामी आफुले आफैलाई सान्तवाना दिइरहेका हुन्छौ । थमथमाइरहेका हुन्छौ । अर्थात अर्काको प्रगति, क्षमता, सफलताले पोलेर त्यसलाई सितल बनाउन हामी अरुको नराम्रो कुरा काटेर होच्याउँछौ । यसरी मौखिक रुपमा होच्याएर पनि हामी आनन्द लिइरहेका हुन्छौ । सन्तुष्ट लिइरहेका हुन्छौं ।
Don't Miss it के हो पार्किन्सन्स रोग ? यस्ता छन यसका लक्षण र उपचार विधि
Up Next के तपाईलाइ जति बेला पनि अल्छि लाग्ने गर्छ ? यस्ता छन् अल्छीपना हटाउने प्रभावकारी उपाय
शाकाहारी भोजन खानु यसकारण फाइदाजनक
यस विषयमा धार्मिक दृष्टिले बहस हुन सक्छ । तर, स्वास्थ्य र वैज्ञानिक दृष्टिले भने त्यति ठूलो बहस छैन । विभिन्न…